बेलायतमा श्रीमतीको ज्यान लिनखोज्दा पूर्व गोर्खा पुगे जेल | nepaliSamachar.com नेपालीसमाचार
[ १ श्रावण २०७७, बिहीबार १५:२४ ] अमेरिकन एयरलाइन्सले २५ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने चेतावनी	अन्तर्राष्ट्रिय
[ १ श्रावण २०७७, बिहीबार १४:३१ ] सामिमा बेगम बेलायत फर्केर नागरिकताका लागि लड्नसक्ने	अन्तर्राष्ट्रिय
[ १ श्रावण २०७७, बिहीबार १४:१८ ] यात्रु बोक्ने एम्बुलेन्स चालक पक्राउ	प्रवास/स्थानीय
[ १ श्रावण २०७७, बिहीबार १२:३२ ] अब यसरी गर्नुस् सुरक्षित हवाईयात्रा…	मुख्य समाचार
[ १ श्रावण २०७७, बिहीबार ११:३८ ] लोकमार्ग कतै भासियो, कतै कालोपत्र उप्कियो	प्रवास/स्थानीय
[ १ श्रावण २०७७, बिहीबार ११:०७ ] ‘बाबा, हामीलाई कोरोना नसार्नू है !’	प्रवास/स्थानीय
[ १ श्रावण २०७७, बिहीबार ११:०४ ] थप २१३ जना कोरोना संक्रमित निको भए, डिस्चार्ज हुनेको संख्या ११ हजार २४९ पुग्यो	मुख्य समाचार
[ १ श्रावण २०७७, बिहीबार १०:२७ ] टेलिकमको सर्भर ह्याक गर्ने धनकुटामा कार्यरत सरकारी कर्मचारी कार्यालयबाटै पक्राउ	प्रवास/स्थानीय
[ १ श्रावण २०७७, बिहीबार १०:२० ] माग उच्च भएपछि किवी खेतीमा जुट्दैछन् किसान	प्रवास/स्थानीय
[ १ श्रावण २०७७, बिहीबार ०९:१६ ] धनकुटाका दुई मावि नमूना विद्यालयमा छनोट	प्रवास/स्थानीय
Homeप्रवास/स्थानीयबेलायतमा श्रीमतीको ज्यान लिनखोज्दा पूर्व गोर्खा पुगे जेल
३ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १७:१४ नेपाली समाचार प्रवास/स्थानीय 0
लण्डन । आफ्नै पत्नीको ज्यान मार्न खोजेको आरोपमा एक भूपू गोर्खा सैनिकलाई बेलायती अदालतले १४ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। बेलायतको स्वीन्डनमा बस्ने विकास गुरुङले पत्नी कामना गुरुङमाथि गत डिसेम्बरमा खुकुरी प्रहार गरी ज्यान लिन खोजेका थिए।
पूर्व गोर्खा सैनिक विकास गुरुङ र कामना गुरुङले २० वर्षको दाम्पत्य जीवन बिताइसकेका थिए। दुई नाबालक सन्तानका बाबुआमासमेत रहेका उनीहरुको सम्बन्ध ठिकठाक चलिरहेकै थियो।
पतिपत्नी दुवैको अन्य व्यक्तिसँग ‘अफेयर’ का कारण उनीहरुको दाम्पत्य सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको थियो। आफ्नो श्रीमानको अर्कै महिलासँगको निकटता थाहा पाएकी कामना पनि अर्को पुरुषसँग इन्टरनेटमार्फत् सम्बन्धमा जोडिएको बताइएको छ।
कामनालाई आशंका र अविश्वास बढिरहँदा सम्बन्ध धेरै लम्ब्याउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्न थाल्यो। निक्कै समयको सोचविचारपछि कामना आफ्नो २० वर्षे दाम्पत्य जीवन टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगिन्। १७ वर्षैमा विवाह गरेकी कामनाले ३७ वर्षको उमेरमा पतिबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहिन्।
गत २९ डिसेम्बरका दिन उनी विकासलाई सम्बन्ध अन्त्य गर्ने प्रस्ताव राख्न तयार भएर बसेकी थिइन्। उनीहरुका दुईजना बच्चा स्कुल गएका थिए। जब उनले प्रस्ताव राखिन्, विकास आक्रोशित भए। विकासले कामनाको मोबाइल खोसेर ‘चेक’ गर्न थाले। उनी त्यतिमा मात्र रोकिएनन्, कामनामाथि हातपात गर्न थाले। एकाएक ‘डिभोर्स’ को प्रस्ताव सुनेर रन्थनिएका उनले पत्नीमाथि अन्धाधुन्ध मुक्का प्रहार गरे। विकासको मुक्काले कामनाकोे नाकमा चोट लाग्यो।
विकास त्यसदिन पत्नीमाथि निर्दयतापूर्वक खनिएका थिए। कामनाले पनि आफ्नो बचाउमा कुनै कसर राखिनन्। तर उनको केही जोर चलेन। विकासको रौद्र रुप देखेर कामनाले अन्ततः बेलायतको आपतकालीन प्रहरी सेवा ९९९ मा फोन गरिन्।
फोनमा कामनाको चित्कार गुन्जिएको थियो। उनले फोन अपरेटरसँग आफूलाई पतिले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेको बताइन्। जब विकासले प्रहरीलाई फोन गरेको थाहा पाए, पहिला त उनी अचम्भित भए। त्यसपछि धम्क्याउन थाले। फेरि कुटपिटको श्रृङ्खला सुरु भइसकेको थियो।
कामना विकासको पञ्जाबाट उम्किएर भागिन्। तर उनलाई हातमा खुकुरी बोकेर लखेट्दै आएका विकासले खुकुरी प्रहार गरिरहेका थिए। विकासले अनेकौँ पटक प्रहार गरेको खुकुरीका चोटका कारण उनी भुइँतलामा पुगेर अचेत अवस्थामा रगतको आहालमा ढलिन्।
कामना रक्तमुछेल भएर ढलेपछि विकासले प्रहरीको सोही नम्बरमा फोन गरेर आफूले ‘श्रीमतीको हत्या गरेको’ बताएको बेलायतको डेली मेल पत्रिकाले लेखेको छ।
केहीबेरमै प्रहरी आइपुग्यो। सुरुमा अचेत ढलेकी कामनालाई देखेर ‘स्पेसल कन्स्टेबल’ ले उनको मृत्यु भइसकेको ठानेका थिए। तर सँगैका अर्का प्रहरीले उनी जीवित रहेको भनेपछि तत्काल स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले उनलाई अस्पताल लगियो। रगतमा डुबेको आमाको शरीरलाई आठ वर्षीय छोराले समेत देखेका थिए। उनको गर्धन र मुखभरी चोट लागेको थियो। शरीरभरी खुकुरीको चोटैचोट थियो। खुकुरी छेकेका उनका हात छियाछिया थिए।
यो २९ डिसेम्बर २०१६ को घटना थियो। कामना दुई महिना अस्पताल बसेकी थिइन्। घटनाको दश महिनापछि पनि उनले आफू पूर्ण रुपमा स्वस्थ नभएको बताएकी छन्। अस्पतालले उनको हात पूर्ण रुपमा निको नहुने जानकारी दिइसकेको छ।
हालै बेलायती अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी घोषित गर्दै विकासलाई १४ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ।
एक महिलासँग आफ्नो प्रेम सम्बन्ध रहेको विकासले अदालतमा पनि स्वीकारेका छन्। उनले अदालतमा आवेशमा आएर घटना घटेको बयान दिएका छन्।
कामनाले अप्रेटरलाई फोन गर्दाको दर्दनाक चित्कार अदालतमा सुनाइएको थियो।
भूपू गोर्खा ब्रिगेडियर ब्रुस ज्याकमनले अदालतमा बयान दिँदै विकासलाई आफूले सधैं पूर्ण इमानदार गोर्खाका रुपमा चिनेको बताएका थिए।
उनीप्रति आफ्नो सधैं सम्मान रहेको भन्दै ब्रुसले इमानदार र निष्ठावान व्यक्ति रहँदारहँदै पनि क्षणिक पागलपनका कारण विभत्स अपराध गरेको बताएका थिए।-नेपाल खबर
किरात लिम्बू दृष्टिमा तिहार र केही प्रस्ताव
ललिताको शव अझै अस्पतालको कब्जामा, भन्छन् – पैसा नतिरे शव दिन्नौ बरु महानगरको फोहोरमा मिसाएर बेपत्ता पार्दिन्छौ
टिकटक प्रतियोगिता – धरानकी रक्षा जसले पाईन नगद पुरस्कार सहित चलचित्रमा खेल्ने अबसर
१ श्रावण २०७७, बिहीबार ०६:३० 0
२९ असार २०७७, सोमबार १६:०९ 0
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल दर्ता सम्पन्न पछि पार्टीमा आबद्ध हुने बारे के हो नीति ? पूर्व माननीय सरिता गिरीले लगाउनु भएको मुद्धा कसरी असफल हुन्छ? संसद अप्रत्याशित अन्त गर्नु बैधानिक की अबैधानिक? विवादित अमेरिकी सहयोग एमसिसि को बारेमा >>>
काभ्रेपलाञ्चोक । नक्कली बिरामी बनाएर यात्रु बोक्ने एम्बुलेन्स चालक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा बा५च ८६३८ नम्बरको एम्बुलेन्सका चालक सर्लाहीको चन्द्र नगर गाउँपालिका–३ बबरगञ्जका >>>
टेलिकमको सर्भर ह्याक गर्ने धनकुटामा कार्यरत सरकारी कर्मचारी कार्यालयबाटै पक्राउ
२९ असार २०७७, सोमबार २१:४६ 0
मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार झमक घिमिरेको आज जन्मदिन
२१ असार २०७७, आईतवार १०:५३ 0
२९ असार २०७७, सोमबार १५:०३ 0
२३ असार २०७७, मंगलवार ०६:०३ 0
३० चैत्र २०७६, आईतवार २२:११ 0
२१ असार २०७७, आईतवार ०५:०२ 0
सामिमा बेगम बेलायत फर्केर नागरिकताका लागि लड्नसक्ने
थप २१३ जना कोरोना संक्रमित निको भए, डिस्चार्ज हुनेको संख्या ११ हजार २४९ पुग्यो
UK, 4tj July 2020. Non-Resident Nepali Association (NRNA) and The International Labor Organization (ILO), Country Office for Nepal, entered intoaproject agreement on 29 June 2020 to implement the COVID 19 – Response to >>>
२० असार २०७७, शनिबार ०७:५६ 0
काठमाडौ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बताउँछन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.खतिवडाले पछिल्ला सूचकबाट बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आर्थिक र सामाजिक गतिविधि खुकुलो भएपछि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन मेटिँदै >>>
“भानु जयन्ती होइन आदिवासी घाँसी जयन्ती मनाऔ” : शेर्पा
२९ असार २०७७, सोमबार ०४:१८ 0
खोई घाँसी ? राजेन्द्र महर्जन
२८ असार २०७७, आईतवार १९:१५ 0